Masiyiwa ventilators flown in, ready for distribution - NewZimbabwe.com Masiyiwa ventilators flown in, ready for distribution - NewZimbabwe.com
Masiyiwa ventilators flown in, ready for distribution
24th June 2020 News Headlines
ECONET founder Strive Masiyiwa has honoured his pledge of donating Intensive Care Unit (ICU) ventilator suites, with the equipment now in Zimbabwe and ready to be deployed to the country’s public hospitals.
Masiyiwa acquired the 45 life-saving equipment – through his Higher Life Foundation Zimbabwe and some donor partners – from the United Kingdom.
The equipment is expected to strengthen Zimbabwe’s fight against the Covid-19 pandemic that has significantly impacted lives of millions of individuals, families, and communities around the world.
Zimbabwe’s total number of confirmed cases in the country stood at 512 yesterday with 64 recoveries, 442 active cases and 6 deaths recorded since the onset of the outbreak in the country on March 20, 2020.
When he made the pledge, Masiyiwa emphasised the donation was a “drop in the bucket, in terms of actual requirement” and called on mining companies and corporate players in other industries to follow suit.
Meanwhile, sources familiar with the development said this will not be a typical “Charity Donation”, but a model where the ownership of the ventilators remains with Higherlife Foundation and Mars.
Masiyiwa, who is also the African Union’s special envoy to coordinate the Africa private sector initiative for the procurement of personal protective equipment and other essential supplies, has been working with global entrepreneurs, Sir Richard Branson and Jeff Skoll, and recently announced that 1 000 ventilators are being manufactured in SA, under free licence.